दशैँमा देश छोड्नेहरुको पिडा
तितोपाटी- महोत्तरी रामगोपालपुरका २० वर्षीय सञ्जय दासलाई दसैँतिहारअघि कतार जान मनै थिएन । तर, भिसा लागिहाल्यो । कम्पनीले टिकट काटेर तुरुन्तै आइहाल्न भन्यो । १७ असोज आइतबार साँझ ६ बजे उनी हतारिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगे ।
सञ्जय दास (बायाँ) ।
पुर्पुरोमा हात राखेर अन्दाजी ३५ वर्षीय पुरुष लगेजमाथि टुसुक्क बसेका थिए । विमानस्थल प्रस्थान ब्लकको पिलरमा ढेसिएका उनको दाहिने खुट्टामा समातेर उभिएकी ५ वर्षीया छोरी बुबाको अनुहारमा ट्वाल्ल परेर हेरिरहेकी थिइन् । रातो कुर्ता सलवार लगाएर छेउमै बसेकी उनकी श्रीमती आँखाभरि आँसु पारेर एकोहोरिएकी थिइन् । यी पतिपत्नीबीच एउटा अनौठो शून्यता थियो । उनीहरू आपसमा कुरा गर्न सकिरहेका थिएनन् । लामो मौनतापछि ती पुरुषले छोरीलाई उठाउँछन्, गालामा माया गर्छन् र काँधमा राख्छन् । अनि श्रीमतीलाई सोध्छन्, ‘पानी खान्छ्यौ ?’ श्रीमतीले मुख छोपिने गरी ओढेको सल हल्का उठाएर आँसु पुस्छिन् र जवाफ फर्काउँछिन्, ‘भैगो ।’ उनी आफ्नो सानो ब्यागबाट दुइटा ट्याब्लेट निकालेर दिँदै भन्छिन्, ‘बसमा आउँदा त उल्टी गर्नु’भो, पिलेनमा पनि त्यस्तै होला, चढ्नेबित्तिकै यो खानू ।’ उनले एन्टिमेटिक ट्याब्लेट श्रीममान्‌काे हातमा थमाइदिइन् ।
गाउँलाई दसैँले छोपेको छ । कोदो फुल्दै छ । धान झुल्दै छ । पारिलो घाम र घरीघरी आउने चिसो सिरेटोले दसैँकाे माहाैललाई झन् रमाइलो बनाइरहेको छ । पढ्ने, काम गर्ने सिलसिलामा विदेशिएका, शहर पसेका युवायुवती गाउँ फर्किन थालेका छन् । तर, पर्वत फलेवास थापाठाना-३ की पुनम क्षत्रीको मनमा पोहोरजस्तो उल्लास छैन । दसैँको छेकोमै भाइ सागरको भिसा झर्‍याे । अघिल्लो साता उनका भाइ सागर कतार उडेका छन् । ‘दसैँचाहिँ मनाएर जाने कुरा थियो । भिसा आइहाल्यो’, पुनमले सुनाइन्, ‘भाइ नहुँदा हाम्राे घरमा दसैँ र तिहार नै खल्लो हुने भयाे ।’ उनका अनुसार सागर नेपालमै सेना वा प्रहरीकाे जागिर खान चाहन्थे । ‘तर, यसमा पनि साेर्सफाेर्स चाहिन्छ । यता समय बर्बाद गर्नुभन्दा विदेश गइयाे भने अलिअलि कमाइ हुन्छ भनेर हिँड्याे’, उनले भनिन्, ‘चाडकाे बेला परिवारमा सन्नाटा छायाे ।’
हुन त, वैदेशिक राेजगारीले आर्थिक अवसर, गरिबी निवारण, विप्रेषण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याएको छ । तर, यो नेपाली युवाकाे बाध्यता र कष्टपछि मिलेकाे उपलब्धि भएकाे राेजगारविज्ञहरू बताउँछन् ।
राेजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘दसैँ आउनुअघि बिरानो देश जाने रहर कसलाई हुन्छ होला र ? तर, अब बाध्यताका बीच पनि नेपालीहरू रमाउन थालेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
समाजशास्त्रीसमेत रहेका उनी दसैँ मान्ने ताैरतरिकामा थुप्रै परिवर्तहरू देखा परेको बताउँछन् । ‘पहिला भेटघाट गरेर दसैँ मान्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले प्रविधिको युगले सँगै नभएर पनि दसैँ मनाउने सुविधा दिएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि दसैँ मनाउन थालिएको छ । यद्यपि, यो बाध्यता नै हो, जुन राज्यको कमजोरिका कारण सिर्जित हो,’ उनी भन्छन् ।
यो समचार शिलापत्रमा- नवराज कुँवर र कौशलकाफ्लेले लेखेकाछन।
October 7, 2021 3:04 pm | नेपालको समाचार, प्रवास, मरुभूमि हालचाल, रोजगार